BRAND MUTUNGAMIRIRI WEMAHARA TUBE MUCHINA
CHINA'S SQUARE TUBE INDUSTRY MUTUNGAMIRIRI
ZVirongwa ZVEMAZUVA ZVAKANAKA
ERW Welded mutopota
Pipe isina waya
YAKASIYANA YAKAITWA STEEL Pipe
Stainless Steel Tubhu / coils
ZVINOKOSHA Pipe & OCTG
NEWS UYE MIBVUNZO
Raw zvinhu vimbiso
100% kutevedzera nemipimo
Kurumidza kupindura mumaminitsi makumi matatu
Ndivanaani vari YuanTaiDeRun
VAKA DZIMWE DZIMWE ZUVA
Tianjin Yuantai Derun Pipe Kugadzira Boka Co, Ltd., yakagadzwa munaKurume 2002 uye yakabva kuTianjin Yuantai Industrial uye Trading Co, Ltd, iri munzvimbo hombe yepombi-yekugadzira base-Daqiuzhuang indasitiri nzvimbo muJinghai Tianjin iri padyo ne iyo China National Highway 104 uye 205 uye ingori makiromita makumi mana kure neTianjin Xingang Port. Iyo yakanakisa nzvimbo yenzvimbo inotsigira iko nyore kune ese epanyika uye ekunze ekufambisa.
YuanTaiDeRun yakavakwa muna 2002
China yepamusoro 500 vagadziri
5 mamirioni matani
Kugona kwayo kugona kunopfuura mamirioni mashanu ematani
Boka redu rinogadzira mhando dzakasiyana dzesimbi pombi, akasiyana mafomu, kuvimbiswa kwemhando, mhando yekutanga
2 padiki id square simbi Tubing nokutengesa
Nhema Carbon Square Tube Masayizi
ASTM A36 inopisa yakakungurutswa kabhoni simbi square chubhu
MS-Square-Pipe-Ukobvu – 3-6mm
ERW Hollow Chikamu kubva kuChina
YuantaiDerun Structural mhango zvikamu
Makore makumi maviri esimbi pombi yekugadzira ruzivo
Mumwe wevagadziri veyero yenyika
Chikuru pakona uye rectangular chubhu kugadzira emakambani
Pamusoro pedzimbahwe muTianjin, kune akawanda masevhisi uye matavi muTangshan nedzimwe nzvimbo.
YUANTAIDERUN TANGSHAN Fekitori
YUANTAIDERUN NO.4 FEKI
YUANTAIDERUN NO.3 FEKI
YUANTAI INDUSTRY UYE KUTengeserana
YUANTAI DERUN GROUP MADZIMUDZIKO KUVAKA
Hong Kong Zhuhai Macao Bridge iri bhiriji uye tanera chirongwa chinobatanidza Hong Kong, Zhuhai neMacao muChina. Iri munzvimbo yegungwa yeLingdingyang yePearl River Estuary muPurovhinzi yeGuangdong. Ndicho chikamu chemaodzanyemba chemhete yein'i Expressway muPearl River Delta mudunhu.
Nhandare yeNestheni yeNyoni
Iyo National Stadium (Nest Bird) iri kumaodzanyemba kwenzvimbo yepakati yeBeijing Olympic Park. Ndiyo nhandare huru yemitambo yeOlympic yeBeijing muna2008. Iyo inovhara nzvimbo ye20.4 mahekita uye inogona kutora 91000 vataridzi. Mushure memitambo yeOlympic, chazove chivakwa chemitambo chakakosha uye yeOlympic nhaka muBeijing.
National Swimming Center, inozivikanwawo se "Water Cube" uye "ice cube", iri muBeijing Olympic Park. Ndiyo mainatatorium yakavakwa neBeijing yeMitambo yeOlympic yeChirungu ya2008 uye chimwe chezvivakwa zvakakosha zveMitambo yeOlympic yeBeijing muna2008.
Hong Kong airport, iri muChek Lap Kok, Lantau Island, Hong Kong, China, makiromita makumi matatu nemana kubva kunharaunda yemadhorobha, inhandare yendege ye4f. Ndiyo imwe yenhandare dzakabatikana kwazvo pasi rese. Ndege dzinopfuura zana dzinoshanda pano, dzinoisa chikamu cheshanu muvhoriyamu yevatakuri vhoriyamu uye kutanga muvhoriyamu yekutakura kwemakore gumi nematanhatu akateedzana
National Grand Theatre yeChina ndeimwe ye "gumi nematanhatu ekuona kweBeijing". Iri kumadokero kweTiananmen Square uye kumadokero kweGreat Hall yevanhu vari pakati peBeijing. Inoumbwa nechivakwa chikuru, mukoridho wepasi pemvura, nzvimbo yepasi pekupaka, nyanza yekugadzira uye nzvimbo yakasvibirira kuchamhembe nekumaodzanyemba mativi.
Yakavakwa pamusoro peanopfuura mamirioni gumi emamirimita emamita epamusoro-soro ivhu, Dubai villa ine nzvimbo dzakasiyana siyana dzepasi uye mapindu, nzira dzino tenderera uye nzvimbo dzakakura dzeveruzhinji. Kuvandudzwa mukati memwoyo weguta, Dubai zvikomo zvivakwa zvakagadzirwa nenzira yepamusoro kukomberedza 18 hole mukwikwidzi gorofu kosi
Kuwait International Airport inhandare yendege iri muFarwaniya, Kuwait, 15.5 km (9.6 mamaira) kumaodzanyemba kweKuwait City, inovhara nzvimbo yemakiromita 37.7 mativi (14.6 mamaira akaenzana). Iyo ndiyo muzinda weAl Jazeera neKuwait ndege.
Beijing CITIC shongwe, inozivikanwawo seZhongguo Zun, ndiyo chivakwa chedzimbahwe reChina CITIC Boka. Inowanikwa mublock z15, iyo yepakati nzvimbo yepakati bhizinesi dunhu. Nehurefu hwakazara hwemamita 528, pasi pe 108 pamusoro pevhu uye pasi pe7 pasi pevhu, inogona kugarisa vanhu zviuru gumi nezviviri kuti vashande, nenzvimbo yekuvaka yakazara ye437000 mativi emamirimita. Chimiro chekuvaka chakagadzirwa mukutevedzera yekare tsika tsika "Zun". Mukati, mune yekutanga simiti yekusimudza nyika ine hurefu hunopfuura mazana mashanu emamita, iyo inonzi "Zvivakwa gumi zvepamusoro zveChina".
SINGAPORE GOOGLE KUVAKA
Ichi chichava tech giant yechitatu data centre muSingapore uye ichave iri muJurong West pazasi pemugwagwa kubva kune zvimwe zvivakwa zviviri.
Dubai Hills Estate ndechimwe chezvinhu zvinokatyamadza zveDubai. Iri pakati pemigwagwa mikuru miviri yeAl Khail Road neMohammed Bin Zayed Road, Dubai Hills Estate inzvimbo yakakura yekugara uye yehupenyu hunosanganisira mavillas, dzimba dzakaderera-kukwira nemataundi. Ichi chikamu chekutanga muchirongwa chikuru cheMohammed Bin Rashid City, icho chakawana zvakafanira mucherechedzi we 'guta mukati meguta' nekuda kwehukuru hwebudiriro.
EGYPT CAIRO CBD
Guta idzva rekutonga reEgypt riri 45km kumabvazuva kweCairo munzira inoenda kuchiteshi cheSuez. Chirongwa ichi chinofanirwa kupa zviuru zvemabasa uye kukurudzira hupfumi. Kana yapera guta idzva rinotarisirwa kugarisa huwandu hwevanhu vanosvika mamirioni mashanu vanogadzirisa dambudziko rekusagadzikana muguta razvino Cairo. Pazasi pane nyowani yeEgypt yekutonga capital chirongwa chenguva uye zvese zvaunoda kuziva nezve purojekiti kubva pakutanga kusvika nhasi.
EGYPT GREEN HOUSE
Iro purojekiti yakakura yemagreenhouses yakaitwa nehurumende yeEgypt inoita kusvetuka munhoroondo yekurima munyika sezvo ichaita basa guru mukuwana kuchengetedzwa kwechikafu munyika ine vanhu vakawanda vechiArabu, nyanzvi dzeEgypt vakadaro.
Nesimba tekinoroji, yekutsvaga uye yekuvandudza nzvimbo
Mazuva makumi mapfumbamwe Quality Guarantee mushure mekusvika kwezvinhu
20 makore ane ruzivo muhukuru-hukuru simbi pombi kugadzira
Tichakuwanira iwe yemahara yemahara quote uye kuronga basa rako pazuva uye nenguva iyo inoshanda zvakanyanya kwauri.
Nyorera tsamba yedu kuti ugare up-to-date nezvatinosimudzira, mitengo, kutengesa, uye zvipo zvakakosha.
Nezvedu Nhau Bata MIBVUNZO Chirongwa Chakavanzika Chiziviso